Nwere ike iji FS9 ụgbọ elu na FSX?
Nwere ike iji FS9 ụgbọ elu na FSX? 3 afọ 4 ọnwa gara aga #248
Nnọọ! Anụrụ m na ịnwere ike iji FS9 ụgbọ elu na FSX. Enwere m ụgbọ elu nke anaghị achọta FSX yabụ m ga-achọ ịma ma enwere ike iji ya FSX. Gbọelu ahụ bụ nsụgharị Airbus A321 Sharklet. Anwalela m ụzọ iji wụnye ya mana ha arụghị ọrụ. Nwere ike, onye nwere ike inyere m aka na nke a?
Nwere ike iji FS9 ụgbọ elu na FSX? 3 afọ 4 ọnwa gara aga #252
ee, ị nwere ike. ụfọdụ folda nwere ike ịdịtụ iche na FSX karịa FS9. na FSX, ụgbọ elu m niile na-aga ebe a:
B: \_ Faịlị Mmemme (x86) \_ Egwuregwu Microsoft \_ Onye Simulator Microsoft Flight Simulator X \_ SimObjects \_ Airplanes
Anaghị m echeta ebe ha wụnyere na FS9. Ọzọkwa dị mma ịdọ aka ná ntị. Ọ B gaR all na ntanetịime maka FS9 ga-arụ ọrụ FSX.